I-CCNA AbaQinisekisiweyo AbaPhicothi - Imibuzo yoVavanyo kunye nezimpendulo - ZI
Iingxoxo zemibuzo-mibuzo kunye neempendulo ze-CCNA
I-CCNA okanye i-"Cisco Certified Network Associate" isitifiketi phakathi kweyona nto ikhangelwe emva kweempawu zeCISCO kwihlabathi lonke. Kukho abangaphezu kwezigidi zeengcali zeCISCO ngaphandle apho bakhonza inani elikhulu lencinci kunye nemibutho elinganisiweyo equka MNCs. I-CISCO yinkampani enkulu ye-IT kunye nenethiwekhi yonxibelelwano kwiplanethi kwaye emva koko i-CCNA isitifiketi ibamba ukubaluleka okukhulu kwaye inika umvuzo ophezulu kunye neentlobo ezahlukeneyo ezinxulumene nazo. Xa kwenzeka ukuba ungumqeqeshi oqinisekisiweyo weCCNA, imibuzo ephantsi enikeziwe mhlawumbi iza kuza xa ujongene nodliwano-ndlebe lwakho lophando. Zifumane ukuba zigcine engqondweni inguqu yokugqibela ukulungiselela kakuhle ukufika kunye nomsebenzi oza kusebenza kunye nokucoca ngokufanelekileyo.
Ukuhamba ngendlela yindlela yokuthabatha iPakethe esuka kumthombo kwiinjongo ezigqibeleleyo. Utshintsho luyijethi ehambayo, exhomekeke kwidilesi ye-IP. Sitshintshi le nkqubo ixhamla ngokuxhamla.
Yiyiphi inxalenye yeSixhobo seNgcaciso kwi-intanethi?
Olu luhlu luqinisekisa ukuba idatha yenzelwe indlela efanelekileyo, ijongene nenendawo yokuphosakela kwaye iqinisekisa ukuba idatha iyiswe ngokuxhomekeke. Olu luhlu apho "i-Ethernet" ihlala khona. Iikhowudi ze-Macintosh kunye neenkcukacha ze-Ethernet zikwahlulo lwe-Data Link.
Kutheni iitshintshi zisetyenziswe njengenxalenye yokunxibelelana?
Izinguqu zenzelwe ukulinganisa intanethi ngendlela efanelekileyo. Ukutshintshela ngokwemvelo igajethi ye-2, ukwenjenjalo ukhangela kwi-adware ye-macintosh, ngoko ke ukwandisa isivinini.
Kuthetha ukuthini ukuxinwa kwenethiwekhi?
Kwinqanaba apho abaxumi abahlukeneyo (ukugqithisa ukugqithisa kunye nomgangatho wesiteshi somnatha) basebenzise okanye bazame ukusebenzisa inethiwekhi efanayo, ukukhutshwa kwenzeka, njengoko inethiwekhi inqabile ukunyanzelisa iintlobo ezahlukeneyo zabaxhasi. Ekubeni i-interface esheshayo isantya esingenawo indawo eyaneleyo yokubamba idatha, emva koko idatha iyancipha.
Iyiphi indima yebhulorho? Ingaba ikwahlula intanethi ibe ngamaqhezu amancinci okanye amacandelo?
Iindlela zokurhweba inethiwekhi, ngelixa zingagqibekanga ubungakanani bayo. Iyadlula iipaseli zedata phakathi kweyiphi na iinqununu ze-2 zenethiwekhi ezisebenza ngokufanayo kunye nendibano yesiganeko sobhalwano.
ImiSebenzi yeCISCO yeCatalcost ngokusebenzisa i-LAN yokuguqula umgaqo-nkqubo?
I-CISCO Catalyst i-5000 isebenzisa "inqumle" ngokutshintshela iindibano kunye nobuchule. Iqhekeza ngokuguqula iya kuqala ukuthumela umda xa idilesi yegosa ibonwa. Ukwahlula phakathi kwalokhu kunye nokuThengisa kunye nokuPhumela kukuba loo Mgcini-ne-Phambili ufumana yonke indawo yokuthumela ngaphambi kokuthumela. Icala lokugcina kunye nokuhamba phambili nguCatalyst 2960 kunye ne-2960-S
Impetus 3750-X kunye ne-3560-X.
Ekubeni ukuphawula okucacileyo akukwazi ukuchongwa ngokusebenzisa idilesi yokujolisa, Ukunqunqa kungathintela ukuqhutyelwa kwenethiwekhi ngokuthumela i-casings engcolileyo okanye i-truncated. Le mijelo eyingozi ingenza iziqhumo zokunxibelelana apho zixhobo ezimbalwa kwi-intanethi zisabela kwizinto ezichaziweyo zichazwe lonke ixesha.
Nguwuphi umsebenzi ogcinwe yi-LLC sublayer?
Uluhlu lwe-LLC okanye uLocker Link Link luxabisekileyo ekunikeni ezinye iindlela ezithile kwizakhiwo zomyili. Umzekelo, unokunika ukulawulwa kokulawulwa kwemilambo ngokusebenzisa nokusebenzisa iikhowudi zokuqala / zokuyeka. Uluhlu olunokusetyenziswa lungasetyenziselwa ukulungisa iimpazamo.
Iyiphi indima ugcino lwesicelo odlala kuyo ekunxibelelaneni?
Izinto ze-3 eziphawulekayo zesalathisi sesicelo zi:
Olu luhlu olunikeza ubungqamene phakathi komxhasi kunye nesicelo.
Olu luhlu olunikeza ukufikelela kwisicelo esahlukileyo, ngokomzekelo, ukulawulwa kwemeyile, ukulawulwa kwewebhu, ukulawulwa kwedokhumenti nokunye.
Ukuvumelanisa nokulungiswa kwezicelo zombini umthengi kunye nomncedisi.
Uthini umahluko phakathi kwe-IGRP kunye ne-RIP?
Ngelixa i-IGRP ihlola izinto ezinjengekhwalithi engapheliyo, amandla okudluliswa kwedatha, ukuxhamla kunye ne-MTU ukuqiqa kunye nokunika inethiwekhi ehamba phambili yokuhamba, i-RIP ixhomekeke kuphela kwiinombolo zokuxhamla ukwazi ukuba yiyiphi indlela efanelekileyo yokusebenzisa inethiwekhi.
Kuthetha ntoni i-Boot P?
Izithuba zokusebenza ezingenazo iiplate kwaye zidibaniswe naluphi na inethwekhi enikeziweyo zixhaswa ngokusebenzisa i-convention yeBoot P. Isalathisi sihlala "kwi-Boot Programme". Ngaphandle kwalokhu, i-Boot P isetyenziswe ngokubanzi ngamagumbi okusebenzela ukwazi idilesi yabo kunye ne-IP ye-IP ye-IP idilesi ye-IP.
Le mibuzo embalwa enokuthi ibuzwe kwi-intanethi. Yiba nokuba kunjalo, le mibuzo ivela kuyo nayiphi na into oyifundeyo phakathi kokugxila kwi-CCNA. Kufuneka ufumane onke amanqaku kwaye ugxininise phezulu ukuya phezulu ukuze ujongane nodliwano-ndlebe ngokuqinisekileyo. Oku kuya kuqinisekisa ukuba uphumelele.